Gbasara Anyị | Hebei Lihua ọgwụ Co., Ltd.
Hebei Lihua ọgwụ Co., Ltd. bụ a elu-tech enterprise ọkachamara mmepe, mmepụta, ahịa na oru ọrụ nke anụmanụ na nkà mmụta ọgwụ, na a aha isi obodo nke 80 nde yuan. Site na ebumnuche nke "Otu narị afọ nke ndụ, oke anụmanụ siri ike na ịba ụba nke ọrụ ubi", ụlọ ọrụ ahụ gbalịrị ịbụ onye na-eweta ngwaahịa ọgwụgwọ mba ụwa nke mbụ dabere na teknụzụ na talent.
E guzobere ụlọ ọrụ ahụ na Shijiazhuang Nanwu Women Development Zone na 2003. Na 2004, e gosiri ya dị ka "Star Enterprise of Veterinary Medicine Production Scale" na Shijiazhuang City. Na 2005, e gosiri ya dị ka "Hebei Provincial Science and Technology Enterprise" na "National Star Promoting Project Key Promotion Product Enterprise" "Na 2006, e gosiri ya dị ka" ọgwụ ọgwụ anụmanụ kachasị ike na ụlọ ọrụ ọgwụ anụmanụ nke China "nke China Tù Na-ahụ Maka Ahụike Animal, na 2007 ka e gosiri dị ka "Top 20 Veterinary Medicine Enterprises in Hebei Province" nke Hebei Animal Health Products Association. Na 2008, anyị chọrọ 35.5 mu nke ala na Xinle Airport Industrial Park, Shijiazhuang City, wee wuo ụlọ ọrụ mmepụta ọhụrụ, wee si otú a banye ọkwa ọhụrụ. Na 2010, ụlọ ọrụ mmepụta ihe 4 na usoro mmepụta 7 nke ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ gafere nyocha GMP nke mba n'otu oge, wee bido ọrụ wee tinye ya na mmepụta. N'otu afọ ahụ, e gosiri ya dịka "Top Ten Key Investment Promotion Units" nke Xinle City. Na 2011, ụlọ ọrụ e eze ọdịda “Teaching Practice Base” site Huazhong Agricultural University. School-enterprise imekọ ihe n'ihu na mma. Na 2012, iji zụlite ahịa mba ụwa, anyị gafere ya otu ugboro. ISO9001, ISO22000 mba quality usoro asambodo. Na 2013, ụlọ ọrụ ahụ gbasaa usoro mmepụta ihe ya wee sonye na ubi aquaculture. A kwadoro atụmatụ zuru ezu maka ọrụ ugbo ala ezi na ụlọ 120,000 maka owuwu. Akụkụ nke mbụ nke oru ngo ahụ metụtara ebe karịrị 300 acres. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ọ bụ nnukwu ọrụ aquaculture na Xinle. Na 2015, nkwadebe maka owuwu nke ụlọ ọrụ ọhụụ malitere, na-agbakwunye ọtụtụ usoro mmepụta maka mbadamba, granulu, ọgwụ ndị na-adịghị agwụ agwụ, wdg, iji kwadebe maka mmepe nke ahịa ụwa. Kemgbe e guzobere ụlọ ọrụ ahụ, site na mmepe nke akụrụngwa, nri na njikọta na nnweta, ọ jiri nwayọ nwee mmụba ngwa ngwa n'ọhịa nke ugbo ọgbara ọhụrụ. Na 2016, ụlọ ọrụ e ọdịda aha nke "Key Shijiazhuang Agricultural Industrialization eduga Enterprise". Na Jenụwarị 2017, usoro mmepụta ọhụụ maka mbadamba, granulu na injections igba ogwu ikpeazụ gafere nnabata GMP na ISO, wee bido ọrụ na mmepụta. E gosiri ya dịka otu afọ. "Hebei Science and Technology SMEs". Na 2018, ọ e ọdịda “Hebei Industrial Enterprise R&D Institution” na “High-tech Enterprise”. Ná mmalite nke 2019, e gosiri dị ka "Key eduga Enterprise nke Hebei Province" na "Hebei Science and Technology Small Giant Enterprise". Companylọ ọrụ ahụ kwenyesiri ike na nkà na ụzụ bụ isi na-arụpụta ihe mbụ!
Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ 216 ugbu a, na agụmakwụkwọ mahadum na n'elu akaụntụ maka 80% nke ngụkọta ụlọ ọrụ ahụ.
Ka ọ dị ugbu a, ire ụlọ na-ere ihe karịrị mpaghara 20, ma na-ejere ndị isi dị iche iche na obere ubi na ọkara aka.
a na-ebupụ ngwaahịa ya na mba 15 (Ethelbia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, wdg).
Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ 216 ugbu a, na agụmakwụkwọ mahadum na n'elu akaụntụ maka 80% nke ngụkọta ụlọ ọrụ ahụ. N'ihe banyere nyocha na mmepe, ụlọ ọrụ ahụ na-arụkọ ọrụ ugbu a na mahadum na ndị nkuzi dịka Huazhong University Agricultural University na Wuhan University of Light Industry. Enwere ọgwụ ike ọhụụ nke mba anọ, na ngwaahịa 6 patent na ụzọ nhazi 3 patent enwetara. N'otu oge ahụ, a ga-ewu ụlọ ọrụ R&D na-akwado ya na njikwa njikwa mma yana nyocha dị mma iji nye nkwalite maka mmepe ụlọ ọrụ na ngwa ngwa.
Ka ọ dị ugbu a, ire ahịa ụlọ na-apụta karịa mpaghara iri abụọ, ma jeere ndị isi otu (COFCO, Yangxiang, Luo Niushan, Tangrenshen, Yurun, Xiangda, wdg) na obere na ọkara. Na 2017 na 2018, ha gafere Etiopia, Nnabata nke Sudan International GMP meghere ahịa mba ofesi Lihua, a na-ebupụkwa ngwaahịa ya na mba 15 (Ethelbia, Sudan, Pakistan, Myanmar, Cameroon, Chad, wdg).
Thelọ ọrụ a gbadoro ụkwụ n’otu echiche, ya na mmụọ ịgbalite n’ihu na ịchụso ịdị mma, njiri mara iji obi ọcha na ịdị uchu na-arụ ọrụ, ndị mmadụ n’uche ma ndị mmadụ; site na mmepe ogologo oge nke ọrụ, na talent ọhụụ. Site na iwebata, ịkọ ihe na mmepe nke ezigbo onyinye, site na ngwaahịa na ọrụ dị elu iji nye onyinye dị mma na mmepe ụlọ ọrụ na-azụ anụ ụmụ China, Hebei Lihua Pharmaceutical ga-emezue nkwa ya na narị afọ nke 21 anụmanụ ọgwụ na ụlọ ọrụ anụmanụ. , ma na-agbasi mbọ ike!
Workshoplọ ọrụ mmepụta ihe na-emejuputa njikwa ihe GMP chọrọ ma chọọ onye ọrụ ọ bụla site na nkọwa niile iji mee ka ha ghọta na imepụta ihe abụghị obere okwu. Naanị njikwa siri ike na njikwa ahazi nwere ike ịmepụta ngwaahịa dị mma, nke bụ ihe anyị na-ekwukarị, enwere uche na njikwa, N'ezie, mee ọgwụ.
Companylọ ọrụ anyị dabere na sayensị na teknụzụ na talent, ma na-agba mbọ ịmepụta akara ngosi ọhụụ na njirimara Lihua. Iji mezuo mkpa dị iche iche nke ngwaahịa ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na ahịa n'ofe mba ahụ, Lihua Pharmaceutical na-ekwusi ike na iguzo dị elu nke ụlọ ọrụ ahụ, na-ewebata ọtụtụ ndị ọkachamara dịka ọkpụkpụ nke nyocha na mmepe Lihua, ma na-akwado ndị ọkachamara kachasị elu na ụlọ nyocha. n'ime ụlọ ọrụ iji kwalite mmepe nke nyocha ọgwụ na mmepe. . Companylọ ọrụ anyị na-eso mmụọ nke amamihe ma na-elekwasị anya n'ịmepụta ngwaahịa. Ngwaahịa isii dị ugbu a emeriela ikike patentịị nke mba yana ngwaahịa atọ nwere merie mba mepụtara patents , na-eduga ọrụ ụlọ ọrụ. N'otu oge ahụ, ọ na-ekwupụta ọgwụ ọhụrụ nke mba na-ewu akara Lihua. Anyị kwenyesiri ike na ịrụ ọrụ nwayọ na ịrụsi ọrụ ike, amamihe na ịdị mma!
Adreesị: Shijiazhuang Xinle Airport Industrial Park